मन्दिरमा नग्नता प्रदर्शन गर्ने युवती गिरफ्तार - dsnews
गत महिना भारतको केरलास्थित विवादित सबरीमाला मन्दिरमा प्रवेश गर्ने असफल प्रयास गर्ने एक युवतीलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ । अश्लीलता प्रदर्शन गराउने खालको एक तस्वीर पोस्ट गरेको आरोपमा उनलाई गिरफ्तार गरिएको हो ।
गत सेप्टेम्बरमा उक्त मन्दिरमा सबै उमेरका महिलालाई प्रवेश दिनका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । तर स्थानीय मानिस तथा भक्तजनहरुले उक्त आदेशको उल्लंघन गरिरहेका छन् । मन्दिर छिर्ने असफल प्रयास गर्ने ती युवती गत मंगलबार कोच्चीस्थित आफ्नै कार्यालयबाट पक्राउ परिन् । धार्मिक भावनामाथि खलल पूराएको आरोप उनीमाथि रहेको छ ।
गत हप्ता सबरीमाला मन्दिर जाने बाटोमा उनले आफ्नो तस्वीर खिचेर फेसबुक अकाउन्टमा अपलोड गरेकी थिइन् । उक्त तस्वीरमा उनी कालो कपडामा रहेकी छिन् । उनको निधारमा चन्दन लगाइएको छ भने तल्लो भागका छोटा कपडाका कारण तिघ्रा देखिएका छन् ।उनको उक्त तस्वीरले सबरीमाला मन्दिरका भगवान अर्थात् स्वामी अयप्पाको मजाक उडाएको र धार्मिक भावनामा चोट पूराएको आरोप लगाइएको छ । उनीमाथि अश्लीलता प्रदर्शन गरेको अभियोग पनि रहेको छ । –एजेन्सी
Previous यस्तो बेश्यालय जहाँ सित्तैमा शारिरीक भोक मेटाउन पाईन्छ तर राखिन्छ अचम्मको यस्तो शर्त !
Next पेटले थिचेर प्रेमीको हत्या ! पुलिसकै होस उड्यो